September 26, 2021 - Celegroup
September 26, 2021 Celegroup1975 0
ရှင်သန်ရတာပင်ပန်းလာရင်ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ ခုနောက်ပိုင်း ရှင်သန်ရတာ ပင်ပန်းလာကြတယ်..မျှော်လင့်ချက်တွေမဲ့သလို အနာဂတ်တွေလဲ ပျောက်နေကြတာမျိုး….။ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ မသိတဲ့မနက်ဖြန်ကို စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ဖြတ်သန်းနေကြရတာ…. ဒါက ကိုယ်တျောက်တည်းလားဆို မဟုတ်ပါဘူး…လူတိုင်းနီးပါးပါဘဲ.. ။ ထုတ်ဘဲမပြောတာ အားလုံးက ခက်ခဲနေကြတာချည်းပါဘဲ…. ။ ပညာရေးတွေ ခက်ခဲကုန်ကြတယ်.. ၊တချို့ကမျှော်လင့်ချက်တွေ ပျက်စီးနေကြရတယ်….။ တစ်ချို့ဆို စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းကုန်တယ်….. ငွေကြေးအခက်ခဲ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲတွေနဲ့ တော်တော်လေးပင်ပန်းနေကြတယ်.. ။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ဓာတ်တွေလဲ အောက်ဆုံးထိ ကျကောင်းကျနေကြလိမ့်မယ်… ။ ရိုးအီနေတဲ့နေ့တွေ ဖြတ်သန်းရတာကြာလာတော့ […]
ပိုက်ဆံကသခင်ရှိတယ် ၊ပိုက်ဆံမှာ ကျိန်စာရှိတယ်
ပိုက်ဆံကသခင်ရှိတယ် ၊ပိုက်ဆံမှာ ကျိန်စာရှိတယ် ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတိမတည်တတ်တဲ့သူတွေ ကြီးပွားချမ်းသာနေတာ တခါမှမတွေ့ဖူးသေးဘူး Money mind-set ပိုက်ဆံ ကသခင်ရှိတယ် ၊ပိုက်ဆံမှာကျိန်စာရှိတယ်ပိုက်ဆံကိုချေးရင်ပြန်ဆပ်ပါ…။ပိုက်ဆံ ကိုပေးမယ်ပြောပြီးကတိတည်တည်ပြန်ပေးပါ…။ အခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်မခက်ခဲဖူးဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူး အနည်းနဲ့ အများရှိကြတာပဲ…။ ပိုက်ဆံ ကို ကတိပျက်အောင် လုပ်ရင် သင့်ဆီမှာပိုက်ဆံဘယ်တော့မှတည် မြဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး…။ ကတိတည်တည်နဲ့ပေးစရာရှိပေး ယူစရာရှိယူပါ…။လက်ခက်ရင်ငွေပါခက်တယ်…။ ကတိမတည်သူက ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ပါဘူး…။ပိုက်ဆံကို ပြန်မဆပ်ချင်တဲ့ သူတွေဆီမှာငွေလဲ မမြဲပါဘူး…။ လက်ခက်သူတွေ ဘာလုပ်လုပ်မအောင်မြင်ပါ…။ Crd ပိုက္ဆံကသခင္ရွိတယ္ ၊ပိုက္ဆံမွာ က်ိန္စာရွိတယ္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကတိမတည္တတ္တဲ့သူေတြႀကီးပြားခ်မ္းသာေနတာ တခါမွမေတြ႕ဖူးေသးဘူး […]
တစ္ရက္ ေဗဒင္ေဟာခန္းသို႕ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရာက္ခ်လာသည္ ။ဘာအကူအညီ ေပးရမ လဲ အေဒၚဟု ေမးလိုက္ရာ အဓိကကေတာ့ ကြ်န္မရဲ့ ေယာကၤ်ားနဲ႔ သားသမီးေတြ အခုတေလာ အိမ္ကို ကပ္တယ္ကို မရွိဘူး ဆရာေလး။ အိမ္မကပ္ေတာ့ ကြ်န္မက စိတ္တိုင္း မက်ျဖစ္။ စိတ္ တိုင္းမက်ေတာ့ ကြ်န္မက ေအာ္ေတာ့တာေပါ့။ ကြ်န္မက ေအာ္ေတာ့ ဒင္းတို႔က နားပူတယ္ဆိုၿပီး အိမ္မွာ မေနခ်င္ၾကျပန္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဆရာရယ္ ကြ်န္မျဖစ္ခ်င္တာက […]
အပျို (၃) မျိုး … အပျိုဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာပါလဲ …
အပျို (၃) မျိုး … အပျို (၁) အပျိုဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာပါလဲ။ အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ ။ အပျို ဆိုတာ အိမ်ထောင် မရှိသေးတဲ့သူ၊ တရားဝင် လက်မထပ် ရသေးတဲ့ မိန်းကလေးဟာ အပျိုပါပဲ။ အိမ်ထောင်မရှိဘူး ၊ လက်မထပ် ရသေးဘူး ဆိုပေမဲ့ ချစ်သူလဲ ရှိခဲ့ဖူးချင် ရှိခဲ့ဖူးလိမ့်မယ်။ ချစ်သူ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာတောင် သမီးရည်းစား ဆိုတဲ့ […]
သူရဲကောင်းတွေရဲ့ နှလုံးသားဆိုတာ ဒါကိုခေါ်တာ…(၂မိနစ်တောင်မကြာတာမို့ လူတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်)
သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားဆိုတာ ဒါကိုေခၚတာ အင္းဝေခတ္ နန္းမေတာ္မယ္ႏု ကိုးကြယ္တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ဆီကို စစ္ကိုင္းက ကိုရင္ေလးတစ္ပါးလာပါတယ္။ ဘုရားရွိခိုးတယ္။ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေနရာမွာထိုင္တယ္။ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္က လုံးဝမၾကည့္ဘူး။ သူ႔စာသူ ဖတ္ေနတာ၊ လုံးဝ ဂ႐ုမျပဳဘူး။ ၾကာလာေတာ့ ကိုရင္ေလးက ေျပာတယ္”ျမတ္စြာဘုရားကို သတိရလိုက္တာ”…တဲ့။ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ နည္းနည္းတြန႔္သြားတယ္။ ဂ႐ု မျပဳလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ျမတ္စြာဘုရားဆိုတဲ့အသံကို ၾကားလိုက္တာကိုး။ ကိုရင္က ဆက္ေျပာတယ္… “ျမတ္စြာဘုရားကို သတိရလိုက္တာ အာဝါသိကဝတ္ကို မသိတဲ့ေက်ာင္းတိုက္ကို […]
ပါးစပ်တွေရဲ့နောက်မှာ ဘဝ တွေပါတယ်
ပါးစပ္ေတြရဲ႕ေနာက္မြာ ဘဝ ေတြပါတယ္ ဘုရားေပါ် တံမၾက်စည်းလွည်းနေရင်းနဲ႔အမွတ်တမဲ့ ျခႇဲ ထပြီး ပါးစပ်မွ သလိပ်ထွက်ကၾသႇားတဲ့ ဘိက္ခုနီမကြီးကို ဒီေလာက်သူျမား သန႔်ရွင်းေရး လုပ်ထားတဲ့နေရာမွာဒီလို လုပ်တယ်ဆိုတာ ပြည့်တန်ဆာမတွေပဲလုပ်တာလို႔ ပဈမွားခဲ့ဘူးလို႔ ပြည့်တန်ဆာမဖြဈခဲ့ရတယ်။ ေဂါတမ ဘရား အေလာင်းေတာ် ဟာ ငါဘုရားဖြဈလျင်ေခြာက်ႏွဈ ကျင့်မည်လို႔ကြဳံးဝါးခဲ့လို႔တကယ်ပဲေခြာက်ႏွဈကျင့်ခဲ့ရတယ်။ ဇဋိလ အေလာင်း ေတာ် ဟာ ဘဝတဈခုမွာဘုရားတည်ခဲ့တယ်။ ဘုရား တည်နေတုန်းရဟန်းတပါးက မပြီးေသးေကြာင်းလာပြီးေပြာတာကို မိန်းမနဲ႔ရန်ဖြဈခါစ စိတ်ဆိုးနေတုန်းမို႔အရွင်ဘုရား တို႔ဘုရား ကို […]
အိမ္မွာ ဒီလိုအပင္ေတြရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္စီးပစ္သင့္ပါတယ္
ကေလးရွိတဲ့ မိသားစုေတြအတြက္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါ ႐ြက္လွပင္ အေၾကာင္း ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။ အိမ္တြင္း ၿခံတြင္း ႐ုံးတြင္း ေနရာေတြမွာ ႐ြက္လွပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အလွပန္း အိုးေတြ အျဖစ္ စိုက္ထားေလ့ ရွိၾကတယ္။ မ်က္စိ ပသာဒ ျဖစ္ေစ သလို၊ အခန္းတြင္း ေလ သန႔္ရွင္း ေစလို႔၊ ၾကည့္ရ တာလည္း လွလို႔ စာေရးသူလည္း သေဘာက် မိတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ […]
ကားစီးရင္ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ အၿမဲေဆာင္ထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း
ကားစီးရင္ ဖေယာင္းတိုင္ တစ္တိုင္ အၿမဲေဆာင္ထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း က်ေတာ္ငယ္ငယ္ ကားစီးရတာႀကိဳက္ေပမဲ့ အသက္20 ေလာက္မွာ ကားစီးရင္ ကားမူးလာပါတယ္ ။ ကားမူးတက္တဲ့ က်ေတာ့ေသာက္က်င့္ကို က်ေတာ္လြန္စြာမွမုန္းပါတယ္။ ကားစီးရင္ကားမူးေပ်ာက္ ေဆးေသာက္ရပါတယ္ မေသာက္ဘဲကားစီးမိရင္ လူကမူးေမာ့ေနတာ၊ တစ္ေန႔ က်ေတာ္မန္းေလးသြားေတာ့ ကားမူးေသာက္ေဆးေသာက္တာ မသက္သာဘဲ ျဖစ္ေနတာ မူးခ်က္ကေတာ့ လက္ကုန္ပါဘဲ။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ က်ေတာ့ေဘးကက်ေတာ္ဆရာမ ေဒၚသန႔္သန႔္ဝင္းက လိုက္လာတာပါ ဆရာမကေျပာတယ္။ ကားမူးရင္ ဖေယာင္းတိုင္ ရင္ဘက္ထဲ ထည့္ထားတဲ့ […]
စကားကြောင့်ပဲ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရနိုင်သလို စကားကြောင့်ပဲ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးရတတ်တယ် စကားတစ်ခွန်းမပြောခင် ပြောသင့် မပြောသင့် အရင်ဦးဆုံး တွေးဆ ဆင်ခြင် နိုင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ တစ်ချို့စကားတွေကို ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာရှိသလိုတစ်ချို့စကားတွေကို နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတတ်တယ် တစ်ခါတရံမှာဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့စကားတွေမှာနှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒတွေ ပေါင်းထည့်ပေးဖို့လိုအပ်သလို တစ်ခါတရံမှာနှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့စကားတွေမှာဦးနှောက်ရဲ့အသိတရားတွေပေါင်းစပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် စကားဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ အသိဥာဏ်တစ်ခုထဲနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်နှလုံးသား ပါဝင်ပါတ်သက်မှု နဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတာပါ တချို့စကားလုံးတွေကြောင့်ရင့်ကျက် စွာတွေးတတ်သူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဘယ်အရာမှ ခြေရာ မထင်ကျန်နိုင်ပေမယ့် ဆင်ချင်ဥာဏ်နည်းသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်စရာတွေ ဒါဏ်ရာတွေ ကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ် တချို့က စိတ်နှလုံးသား နူးညံ့နေပေမဲ့စကားလုံးတွေက ကြမ်းတမ်းနေတတ်တယ်တချို့ကစကားလုံးတွေ […]
ရေးထားတဲ့ စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ မိုက်တယ် ရေးချက် ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင် တာပါ
သိန်း၈၀၀၀တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ယောကျ်ားကို လိုချင်ရင် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ ကိုယ်တိုင်က ၁၀တန်းလည်းမအောင် ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို မိဘကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမားအဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့postကို သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါမှာ လာလာ Tag ကြတာမြင်တော့ ငါ့တပည့်တွေ အစား ရင်နာမိတယ်Ro […]
ကေလးေတြကို ခ်စ္ရင္ ေအာက္ပါအက်င့္သုံးခုကို ေဖ်ာက္ေပးပါ
ကလေးများဟာ အောက်ပါအကျင့်ဆိုးကြီး သုံးခုကို စွဲကပ်သွားပြီဆိုရင် ဘဝတစ်ခုလုံး ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ မိဘများ အနေနဲ့ အလေးထားပြီး အမြန်ပြုပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။ ၁။ မှီခိုလွန်းခြင်း၊ ဦးနောက်မသုံးလိုခြင်း၊ ပြသနာသေးသေးလေးကအစ မိဘကို အကူအညီတောင်းခြင်း။ အချစ်လွန်တော့ အနှစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးများဟာ အရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိ အစစ အရာရာ လူကြီးကို အားကိုးတကြီး ဆက်ဖြစ်နေတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ပြသနာသေးသေးလေးကအစ ဖြေရှင်းဖို့ မစဉ်းစားဘူး၊ ဦးနောက်သုံးဖို့ လေးဖျင်းနေတတ်တယ်။ လူကြီးကို အားကိုးလွန်တဲ့ကလေးဟာ စိတ်ဓာတ်ပိုမို ပျော့ညံ့ […]
လောကီပညာထဲက သိစရာ လက်သည်း ခြေသည်းညှပ်ကြတယ်…. တချို့က ကျန်းမာရေးအရ ညှပ်တယ် တချို့က လက်သည်းရှည်ရင်မနေတတ်လို့ ညှပ်တယ် ဘယ်လိုပဲ ညှပ်ကြပါစေ ညှပ်ရင်း လာဘ်ပွင့်တယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူးလား.. ဆရာဦးမင်းနိူင်ရဲ့ လောကီပညာသိစရာ ထဲကနည်းလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. စနေနေ့ ညှပ်ရင် အကြွေးပြန်ရတယ် ၊ ငွေအစုအလိုက်အပုံလိုက်ဝင်တတ်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့ ညှပ်ရင် အကြွေးကျေတယ်။ သောကြာနေ့ညှပ်ရင် ဇနီးမယား၊ သမီး ချွေးမ ကိစ္စတွေလိုရာပြည့်တယ်။ ကြာသပတေးနေ့ညှပ်ရင် ပညာကိစ္စ၊ ဆရာကိစ္စ […]